ဂီတနဲ့မြို့ပြကို ခေတ္တနှုတ်ဆက်ပြီး မွေးရပ် ဇာတိမြေကို ပြန်သွားခဲ့ရတဲ့ တေးသံရှင် ညီမင်းခိုင် – Cele Snap
ဂီတနဲ့မြို့ပြကို ခေတ္တနှုတ်ဆက်ပြီး မွေးရပ် ဇာတိမြေကို ပြန်သွားခဲ့ရတဲ့ တေးသံရှင် ညီမင်းခိုင်
ပရိသတျကွီးရေ သီခငျြးကောငျးလေးတှကေို ရေးသား ဖနျတီတဲ့ တေးရေးညီမငျးခိုငျကတော့ ဒီနမှေ့ာ ရနျကုနျမွို့ကွီးကို ခတ်ေတခှဲစှာနှုတျဆကျပွီး မှေးရပျဇာတျမွကေို ပွနျသှားခဲ့ရတဲ့ အကွောငျး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ စိတျမကောငျးစှာနဲ့ အသိပေးလာခဲ့ပါတယျ။ ညီမငျးခိုငျကတော့ မကွာသေးမီကလညျး ကနျြးမာရေးမကောငျးဖွဈနတော ပရိသတျတှလေညျး သိရှိပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ။
ညီမငျးခိုငျက ကနျြမာရေးမကောငျးဖွဈနခေဲ့တာရယျ တခွားအကွောငျးအရာ အခကျ အခဲတှနေဲ့ ကွုံတှနေ့ရေတာကွောငျ့ ဇာတိမှေးရပျမွကေို ပွနျသှားခဲ့တဲ့ အကွောငျးကို “ရငျဘတျထဲက စာခြှနျလှာ” ဆိုပွီး စိတျမကောငျးစှာနဲ့ အခုလိုပဲရေးသားခဲ့တာပါ။”ရနျကုနျမွို့ကွီးကိုအခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုအထိ နှုတျဆကျခှဲခှာရတဲ့ ခံစားခကျြက လှလှပပတော့ဘယျဖွဈပါ့မလဲ။ကိုယျ့အသကျတဈဝကျလောကျက ဒီပွညျမမှာ လှုပျရှားရုနျးကနျကွိုးစားနထေိုငျရငျးအခြိနျတှကေုနျဆုံးစခေဲ့တာလေ။အနုပညာအတှကျခဲရာခဲ ဆဈဖွဈနတေဲ့ယခုလိုအခြိနျကာလမြိုးနှငျ့ ကနျြးမာရေးခြို့တဲ့ခွငျးကံဇာတာတှကွေားမှာ နောကျဆုံးတော့ မှေးရပျမွေ မိသားစုအရိပျအောကျ ခဏတာထှကျခှာနားခိုရတော့မညျမှာ မလှဲဧကနျပဲပေါ့ အသငျလောက ခဈြခငျလေးစားရတဲ့ သူငယျခငျြးမိတျဆှေ ဂီတညီအဈကိုမောငျနှမမြားနှငျ့ ဂီတခဈြပရိတျသတျမြားအားလုံးကို တလေးတစားနှုတျဆကျလှမျးဆှတျရငျး စိတျမကောငျးခွငျးမြားစှာနဲ့ NMK. (ခတ်ေတအမရေိ့ပျ)ဂီတနှငျ့ပွညျမကိုခတ်ေတခှဲခှာနှုတျဆကျရငျး” ဆိုပွီး ပရိသတျတှကေို အနုပညာအလုပျတှကေို ခတ်ေတရပျနားကွောငျး အသိပေးပွောကွားလာ ခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှကေလညျး သူတို့ ခဈြခငျအားပေးရတဲ့ တေးရေးညီမငျးခိုငျတဈယောကျ ကနျြးမာရေးေ တှပွနျကောငျးပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို အမွနျဆုံးပွနျလညျလုပျဆောငျနိုငျဖို့နဲ့ အစဉျအမွဲအားပေးနကွေောငျး အားပေးစကားပွောဆိုနခေဲ့ကွပါတယျ။ ပရိသတျကွီးတှထေဲက တေးရေးညီမငျးခိုငျရဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီသတငျးလေး ကိုမြှဝဖေျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ပရိသတ်ကြီးရေ သီချင်းကောင်းလေးတွေကို ရေးသား ဖန်တီတဲ့ တေးရေးညီမင်းခိုင်ကတော့ ဒီနေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ခေတ္တခွဲစွာနှုတ်ဆက်ပြီး မွေးရပ်ဇာတ်မြေကို ပြန်သွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ညီမင်းခိုင်ကတော့ မကြာသေးမီကလည်း ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတာ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ညီမင်းခိုင်က ကျန်မာရေးမကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာရယ် တခြားအကြောင်းအရာ အခက် အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့် ဇာတိမွေးရပ်မြေကို ပြန်သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို “ရင်ဘတ်ထဲက စာချွန်လွှာ” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အခုလိုပဲရေးသားခဲ့တာပါ။”ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ နှုတ်ဆက်ခွဲခွာရတဲ့ ခံစားချက်က လှလှပပတော့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ကိုယ့်အသက်တစ်ဝက်လောက်က ဒီပြည်မမှာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်ကြိုးစားနေထိုင်ရင်းအချိန်တွေကုန်ဆုံးစေခဲ့တာလေ။အနုပညာအတွက်ခဲရာခဲ ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့ယခုလိုအချိန်ကာလမျိုးနှင့် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်းကံဇာတာတွေကြားမှာ နောက်ဆုံးတော့ မွေးရပ်မြေ မိသားစုအရိပ်အောက် ခဏတာထွက်ခွာနားခိုရတော့မည်မှာ မလွဲဧကန်ပဲပေါ့ အသင်လောက ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ ဂီတညီအစ်ကိုမောင်နှမများနှင့် ဂီတချစ်ပရိတ်သတ်များအားလုံးကို တလေးတစားနှုတ်ဆက်လွမ်းဆွတ်ရင်း စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ NMK. (ခေတ္တအမေ့ရိပ်)ဂီတနှင့်ပြည်မကိုခေတ္တခွဲခွာနှုတ်ဆက်ရင်း” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို အနုပညာအလုပ်တွေကို ခေတ္တရပ်နားကြောင်း အသိပေးပြောကြားလာ ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ တေးရေးညီမင်းခိုင်တစ်ယောက် ကျန်းမာရေးေ တွပြန်ကောင်းပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ အစဉ်အမြဲအားပေးနေကြောင်း အားပေးစကားပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက တေးရေးညီမင်းခိုင်ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေး ကိုမျှဝေဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
အခုလိုအချိန်မျိုးမှာလာရောက်လှူဒါန်းပေးတာမို့ တချို့သက်ကြီးဘိုးဘွားများ ပီတိမျက်ရည်များပင်ကျနေတာကြောင့် သူမအလှည့်မှာလဲ အိုဇာတာကောင်းဖို့ ဆုတောင်းလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ..